Izindaba - Yini ethinta ubude bempilo yamalambu we-LED aqhuma ukuqhuma?
Yini Ethinta Isikhathi Sokuphila Samalambu E-LED Explosion-proof?
Isibani se-LED sokuqinisekisa ukuqhuma luhlobo lwesibani sokuqhuma. Umgomo wayo uyefana nowesibani sokuqhuma, ngaphandle kokuthi umthombo wokukhanya ungumthombo wokukhanya we-LED, obhekisa kusibani esinezinyathelo ezahlukahlukene ezithathiwe ukuvikela imvelo yothuli negesi ukuthi ingashiswa. Amalambu e-LED okuqinisekisa ukuqhuma njengamanje angamalambu okonga amandla okuqhuma amandla, asetshenziswa kumakhemikhali kaphethiloli, ezimayini zamalahle, emafayilini kagesi, eziteshini zegesi nakwezinye izindawo.
Sonke siyazi ukuthi izibani ze-LED zokuqhuma ziba nemiphumela emihle yokonga amandla nokukhanya okuhle. Ngakho-ke yini ethinta impilo yamalambu we-LED wokuhlola ukuqhuma, futhi ukunakekelwa kungaletha kanjani izinzuzo?
Izici eziningana ezithinta impilo yezibani ze-LED zokuqhuma:
1. Ikhwalithi yentambo yisimo esiyinhloko esinquma impilo yesibani sokuqhuma se-LED
Enqubeni yokukhiqiza yamachips e-LED, okunye ukungcola kwe-ion ukungcola, ukukhubazeka kwe-lattice nezinye izinqubo zobuchwepheshe kuzothinta impilo yabo. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwezintambo eziphezulu ze-LED yisimo esiyinhloko.
Isibani sokuqhuma sikaKeming sisebenzisa ubuhlalu besibani esisodwa se-LED esinamandla amakhulu silingisa i-lumen nomklamo omkhulu we-brand chip. Umthombo wokukhanya we-LED owakhelwe ngokukhethekile unokuqagela okufanayo, ukudluliswa kokukhanya okuphezulu nokukhanya okuphansi.
2. Ukwakhiwa kwamalambu kuyinkinga esemqoka ethinta impilo yamalambu e-LED okuqhuma kuwo
Ngaphezu kokuhlangana nezinye izinkomba zesibani, ukwakheka kwesibani okunengqondo kuyinkinga ebalulekile yokuqeda ukushisa okwenziwe lapho kukhanyiswa i-LED. Isibonelo, izibani zomthombo wokukhanya ezihlanganisiwe emakethe (i-30 W eyodwa, i-50 W, i-100 W), umthombo okhanyayo wale mikhiqizo kanye nengxenye yokuxhumana yokushiswa kokushisa okushisa akubushelelezi, ngenxa yalokho, eminye imikhiqizo ibanga ukukhanya ngemuva kwezinyanga eziyi-1-3 zokukhanyisa. Ukubola kungaphezu kwama-50%. Ngemuva kokuthi eminye imikhiqizo isebenzise ithubhu yamandla aphansi ecishe ibe ngu-0.07 W, ngoba ayikho indlela efanelekile yokushabalalisa ukushisa, ukukhanya kuyabola ngokushesha okukhulu. Lezi zinto ezintathu ezingezona imikhiqizo zinokuqukethwe okuphansi kobuchwepheshe, izindleko eziphansi nesikhathi esifushane sokuphila.
3. Ukunikezwa kwamandla kagesi kubaluleke kakhulu empilweni yesibani sokuqhuma kwe-LED
Ukuthi ukunikezwa kwesibani kunengqondo nakho kuzothinta impilo yaso. Ngoba i-LED iyithuluzi eliqhutshwa njengamanje, uma amandla kagesi eguquguquka kakhulu, noma imvamisa yamaphiki kagesi ephezulu, izothinta impilo yomthombo wokukhanya we-LED. Impilo yokunikezwa kwamandla uqobo lwayo incike kakhulu ekutheni ukwakhiwa kwamandla kagesi kunengqondo yini. Ngesisekelo sokuklanywa kokuphakelwa kwamandla okunengqondo, impilo yokunikezwa kwamandla incike empilweni yezingxenye.
4. Ithonya lokushisa kwama-ambient empilweni yezibani ze-LED zokuqhuma
Impilo emfushane yamanje yamalambu e-LED ikakhulukazi ngenxa yempilo emfushane yokuphakelwa kwamandla, futhi impilo emfushane yokunikezwa kwamandla kungenxa yempilo emfushane ye-electrolytic capacitor. Esinye isici senkomba yokuphila yama-capacitors e-electrolytic ukuthi kufanele sikhombise impilo engaphansi kwezinga lokushisa kwemvelo yokusebenza ukuthi mangaki ama-degree, futhi kuvame ukucaciswa njengempilo engaphansi kwezinga lokushisa elingu-105 ℃. Ukwehla kwezinga lokushisa elincane, isikhathi eside sempilo yesevisi ye-capacitor. Ngisho ne-capacitor electrolytic capacitor enesikhathi sokuphila samahora ayi-1 000 ingafinyelela kumahora angama-64,000 ezingeni lokushisa elingu-45 ° C, elanele isibani se-LED esijwayelekile esinempilo yamahora angama-50,000. Kusetshenzisiwe.
Ukugcinwa kwansuku zonke kwezibani ze-LED zokuqhuma:
Sithenga isibani se-LED sokuqhuma esinekhwalithi enhle singasetshenziswa iminyaka emithathu, kepha imvamisa awunaki ukunakekelwa kwesibani se-LED sokuqhuma, ngakho-ke ungasisebenzisa iminyaka emibili kuphela, okulingana Ukuchitha imali eningi, senza kanjani isibani se-LED sokuqhuma ukuqhuma Isikhathi eside sokuphila kuyisihluthulelo, ake sikhulume kafushane ngezinto ezimbalwa ezingezansi:
1. Hlanza njalo uthuli kanye nezinye izibi ezindlini zesibani (uma kungenziwanga isikhathi eside, uthuli lunamathela kusibani ukuvimba ukushisa okukhishwa yisibani, okuholela ekutheni ukushisa kungachithwa. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa isibani sokuqhuma kwe-LED sokuqhuma okuhle), ukushisa okuhle kokushisa kuyinto ebalulekile yokwelula impilo ye-LED.
2. Ukulungiswa okungapheli kanye nokuvalwa kwamalambu. Kunconywa ukuthi izibani zingasebenzi zingaphazanyiswa amahora angama-24, ngoba izinga lokushisa kwamalambu lizokhuphuka kancane ngesikhathi somsebenzi ongaphazanyiswa. Ukuphakama kokushisa, umthelela omkhulu empilweni yesibani. Ukuphakama kwezinga lokushisa, kufushane impilo yesibani. .
3. Isembozo sokudlulisa ukukhanya sihlanza njalo uthuli nokunye ukungcola ukuqinisekisa umphumela wokudlulisa ukukhanya
4. Hlola njalo amandla wesifunda. Uma i-voltage ingazinzi, isifunda kufanele sigcinwe futhi silungiswe.
5. Izinga lokushisa eliseduze lamalambu e-LED okuqhuma kuwo akumele libe ngaphezu kwama-degree angama-60, kanti nempilo yesevisi ingancishiswa ngqo ngo-2/3 uma ingaphezulu kwama-degree angama-60.
6. Amalambu kufanele akhanyiswe njalo ngesikhathi sokusetshenziswa okujwayelekile.